Ikike Authoritylọ maka Search | Martech Zone
Ikike Authoritylọ maka .chọ
Satọdee, Nọvemba 19, 2011 Sunday, November 20, 2011 Douglas Karr
M na a ogologo oge na-akwado nke search engine njikarịcha ruo oge ụfọdụ, mana ahụmịhe nke m na nso nso a ya na Martech ejirila obi eziokwu gbochie m ịnụ ụtọ m. Echeburu m na SEO bụ ezigbo ụzọ nke ịzụ ahịa na-eto eto n'ihi na ọ bụ ihe ị nwere ike ijikwa. Nke ahụ bụ eziokwu ruo n'ókè ụfọdụ, mana ọ nwere ike iburu gị ruo n 'olu ọchụchọ maka isiokwu enyere. Achọpụtara m na ozugbo anyị ruru n'ọkwá kacha elu, ihe ọ na-arụpụta na-adịkarị njọ. Enwekwaghị m okwukwe na ọnụọgụ ọnụọgụ ọchụchọ Google dị elu ma enwekwaghị okwukwe na mbọ achọrọ iji bulie nke ọma.
Nke a ọ pụtara na m ga-akwụsị SEO? Mba Nzọụkwụ mbụ m na-eme na ndị ahịa ọ bụla na-ahụ na ọdịnaya ha dị wuru na kachasị n’elu ikpo okwu, na e debere isiokwu ha n'ụzọ ziri ezi, ha makwara mkpụrụ okwu na asọmpi. Ihe m meworo bụ itinyekwu mgbalị ọ bụla wee mee ka ọ kwalite karịa njikarịcha. Anaghị m ekwu okwu azụ-na-ejikọ… nke na-eme ihe n'eziokwu na-efu traction na njem. Ana m ekwu banyere nkwalite nke ọdịnaya dị egwu - yana ma ọ bụ na-enweghị njikọ - site na mgbasa ozi na ọwa mmekọrịta.
Otu ụlọ ọrụ nwere ike itinye ọtụtụ narị backlinks n'afọ niile ma ọ gaghị eme ya n'ọkwa nke na-eme ka okporo ụzọ ọ bụla dị mkpa. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ tinye otu mbọ ahụ n'ide ihe dị egwu, na-akwalite ma na-etinye ọdịnaya ahụ, anyị na-ahụ mmụba dị ịtụnanya n'ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa bara uru… yana ọnụego ntọghata ndị ọzọ. Nkwupụta miri emi nke si n'aka m bụ nke a… Echere m njikarịcha ọchụchọ bụ ụlọ ọrụ na-anwụ anwụ. Ọ bụrụ na ọdịghị ihe ọzọ, ụbọchị ya agụọla.
Ihe omuma a site na Usoro kwụ ọtọ na-agwa usoro ndị ụlọ ọrụ na-eme iji wulite ikike saịtị. Aga m agba gị ume ileghara akụkụ njin ọchụchọ ahụ ma rụọ ọrụ na iwulite ọdịnaya dị ukwuu ma kwalite ya site na ọwa ha kọwara iwu ikikeAnyị na-enweghị search!
Infographic Ahịa Internetntanetị by Usoro kwụ ọtọ.
Tags: ikikeikike ụlọsearch engine njikarịchanjikarịcha ọchụchọA
Nnyocha Pew nke Ọrụ Online
Nov 19, 2011 na 8:46 PM
Ọ na-eju m anya mgbe ụfọdụ site na nnukwu saịtị m na-ahụ na anaghị enwe blog na ha.
Karịsịa maka azụmaahịa obere na ọkara, Blọọgụ bụ ndụ ndụ.
Ka anyị nwee olileanya na ha ga-amụta!
Nov 20, 2011 na 2:17 PM
Emechara m na-agụ na ihe na-erughị pasent 30 nke ụlọ ọrụ nwere blog (echere m na ọ nwere ike ịbụ obere). N'akụkụ nke ọzọ nke ọnụ ọgụgụ ahụ, ihe dị ka pasent 70 nke ụlọ ọrụ Fortune nwere blog. Otutu ulo maka ulo oru ndi puru ide ihe di nma iji mee ihe di iche na ala ha.
Onye kere Sway
Nov 22, 2011 na 12:48 AM
M na-edetu ọdịnaya maka netwọkụ mmekọrịta azụmahịa. Ndị ọrụ ntanetị ahụ chọrọ SEO ọzọ, isiokwu ndị ọzọ (ee, ọ bụ n'oge na-adịbeghị anya, mana amaara m ihe kpatara i ji chee nke ahụ), na-anwa ịchụso engines ọchụchọ karịa nke oge.
Atụmatụ m bụ itinye ọdịnaya ọhụrụ 2-4 ugboro kwa izu, ma ọ bụ okwu 300 ma ọ bụ okwu 3000 enweghị isi - ihe niile dị mkpa bụ na a gwara ya, dị mkpa, ma na-etinye aka. Ebum n'uche m bụ ịwepụta ihe ndị mmadụ chọrọ ịkọrọ.
Ihe dị mwute bụ na anyị na-eji CMS nwe ya, yabụ na anyị enweghị blog, mgbanwe CMS ọ bụla m chọrọ bụ okwu mmepe, saịtị ahụ gbalịsiri ike inweta traction ọ bụla.
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta = Ọ Dị Mma
Ndị otu jikọrọ aka na nzukọ = Mma
O juru m anya na ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị blọọgụ - ndị ọrụ ha ka na-ebi ndụ maka ọchụchọ ma na-aghọgbu Google, mgbe ha kwesịrị ile anya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka ha wee tinye ndị ahịa na ndị ahịa ha n'ọrụ.
Nov 22, 2011 na 1:51 AM
Hụrụ ya n'anya! Ndị otu jikọrọ ọnụ> Ọchụchọ Injin Ọchụchọ